လေ့လာမှုတွေအရ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းတဲ့ အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ မငြင်းနိုင်ဘူး
လေ့လာမှုတွေအရ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းတဲ့ အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေ မငြင်းနိုင်ဘူး လေ့လာမှုတွေ အရ အိမ်မှု ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ကူညီ လုပ်ဆောင်ပေး တက်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေတယ်လို့ တွေ့ရှိ ထားပါတယ်။ ဒီနေ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို မျှဝေပေး သွားမှာပါ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြင်အရ အိမ်မှုကိစ္စ (အဝတ်လျှော်တာ၊ တံမြတ်စည်းလှဲတာ၊ ပန်းကန်ဆေးတာ၊ ထမင်းချက်တာ) တွေ လုပ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ အတွက် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့အပြင် လက်တွဲဖော် အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပို များကြောင်း သိရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အမျိုးသားတွေ သာမက အမျိုးသမီးတွေပါ အပြင်ထွက်ပြီး …
အရပ်ရှည်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အရပ်ပုပု အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
အရပ်ရှည်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အရပ်ပုပု အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ တောင် ကို ရီး ယား နိုင် ငံ က သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် တွေ ရဲ့ သု တေ သ န ပြု ချက် အ ရ အ ရပ် ပု သူ အ မျိုး သ မီး နဲ့ အ ရပ် ရှည် သူ အ မျိုး သား တို့ ဟာ အ ပြန် အ …
“မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်ပတ်ကို ခေါင်းဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်သလဲ?”
“မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေဖြင့် တစ်ပတ်ကို ခေါင်းဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်သလဲ?” မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ပတ်ကို ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်လဲ ဆိုရင် လူတိုင်းမှာ မွေးရာပါ အသားအရေ အမျိုးအစား မတူညီကြ သကဲ့သို့ ဆံသားအမျိုး အစားလည်း ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ (က) ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသား (ခ) ပုံမှန် (အလယ်အလတ်) ဆံသား (ဂ) ဆံသားအုံကောင်း (ဆံပင်ထူ) (ဃ) ခြောက်သွေ့ (မွဲခြောက်ခြောက်) ဆံသား ဆိုပြီးတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဆံသားလေးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မတူညီတဲ့ ဆံသား အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍၊ ခေါင်းလျှော်တဲ့ အကြိမ်နှုန်း ဟာလည်း အနည်းအများ ကွာဟမှု ရှိပါတယ် ၁။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ …
လူသိနည်းလှသော တချိန်က ရုပ်ရှင်ထဲက အရေးပိုင်မင်းကြီး သို့မဟုတ် အန်ကယ်စလေဒင်စံမြင့် ဘ၀အကြောင်း
လူသိနည်းလှသော တချိန်က ရုပ်ရှင်ထဲက အရေးပိုင်မင်းကြီး သို့မဟုတ် အန်ကယ်စလေဒင်စံမြင့် ဘ၀အကြောင်း ၁၉၈၇ ခုနှစ် ပုဇွန်တောင် နွားသတ်ရုံတွင် သတ်ဖြတ်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးလာသော ကျွဲကြီးတစ်ကောင်သည် ရုတ်တရက် လွတ်ထွက်သွားပြီး သားသတ်ရုံ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအား ချိုဖြင့် အသေခတ်ပစ် လိုက်သည်။ သေတွင်းမှ လွတ်လာသော ထိုကျွဲရိုင်းကြီးသည် မြင်မြင်သမျှ လူများအား လိုက်လံ ဝှေ့ခတ်ရင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည်။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရဲစခန်းမှ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ ဖုန်းဆက်လာသည်။ ဦးစံမြင့် ဆိုသူကို စခန်းသို့ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးလိုက်ရန်။ အဆိုပါ ဦးစံမြင့်သည် စခန်းသို့ ရောက်သည်နှင့် စခန်းမှ အရာရှိများက ဒသမ ၃၀၃ ရိုင်ဖယ်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ထို့နောက် အထက်အမိန့်အရ …
စိတ်ထား ယုတ်ညံ့တဲ့ မိန်းမတွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ လက္ခဏာ ၅ ခု…!
စိတ်ထား ယုတ်ညံ့တဲ့ မိန်းမတွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ လက္ခဏာ ၅ ခု…! ၁ ။ ကိုယ့်ဘဝကို ရှက်တယ် လူတိုင်းဟာကံ မတူတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မွေးဖွားလာပုံ ချင်း၊ကြီးပြင်းလာ ပုံချင်း မတူညီပါဘူး။ တစ်ချို့က ချမ်းသာစွာ မွေးဖွား လာရတယ်၊ တစ်ချို့က ဆင်းရဲစွာ မွေးဖွားလာကြတယ်။ မိန်းမယုတ်တွေဟာ ဆင်းရဲချို့တဲ့စွာ မွေးဖွားလာ ရတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုရှက်တယ်၊ ကိုယ့်မိဘကို ထုတ်ပြောရမှာ ရှက်တယ်၊ မိသားစုကို လူရှေ့ထုတ်ပြရမှာ ရှက်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုကို လူရှေ့ထုတ်ပြရမှာ ရှက်တာလောက် ယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထား မရှိတော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလို မဖြစ်အောင်ဆင်ခြ င်နေထိုင်ပါ ။ …
လက်တွဲဖော်မိန်းကလေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍများ အောင်မြင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကို ကြည့်တိုင်း သူတို့ရဲ့နောက်မှာ ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိနေတတ်တာ များပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အားထုတ်မှုအပြင် သူ့တို့ကို အကောင်းဆုံး ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့ ထောက်တိုင်တွေ ပံ့ပိုးတဲ့သူတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာလို့ ချစ်သူရည်းစားရှိလို့ အိပ်မက်တွေ ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာက မကောင်းပါဘူး။ ချစ်နေကြတဲ့သူတွေ အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးရင်း အိပ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆို သူရဲ့ လက်တွဲဖော်မှာ ဒီလိုအချက်တွေ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော် …. (၁) နားလည်မှု အချစ်ဆိုတာက ဘဝ တစ်ခုလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝထဲက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါ။ ချစ်တာက ချစ်တာပဲ …
This Year : 313228
Total Users : 608361
Total views : 2970710